भोकमरीको चपेटामा हलिया बस्ती, एउटै घरमा १०७ जनाको बसोबास ! | Ratopati
भोकमरीको चपेटामा हलिया बस्ती, एउटै घरमा १०७ जनाको बसोबास !
personरासस exploreबझाङ access_timeजेठ २८, २०७८ chat_bubble_outline0
थलारा गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि ३० मिनेटको दूरीमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यहाँ २५ दलित परिवारको बसोवास छ । बस्ती पुग्ने बित्तिकै एउटा स्लेटले छाएको घर भेटिन्छ । घर निकै जीर्ण भैसकेको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यथार्थ छ वटा मूल ढोका भएको त्यस घरमा २२ परिवारका १०७ जना बस्दा बस्दै आएका छन् । घर हेर्दा पाँच÷छ परिवारलाई पनि सहज रुपमा बस्न नमिल्ने खालको छ ।